Recliner Accessories Factory - China Recliner Zvishandiso Vagadziri, Vatengesi
Application: Chair, sofa, fenicha, nezvimwewo.
Kurema Kukwanisa: 180-250kgs
Package: Pallet yemapuranga
HS kodhi: 94019090
a.Kushandisa imwe kana maviri motors kutyaira michina.Mamota maviri anodzora backrest uye footrest zvakasiyana;
b.Zvakanyanya nyore kugadzirisa chimiro pane chero nzvimbo nemota;
c.Inowanikwa mune chero hupamhi hwechigaro chesofa,inongoda kushandura zvimwe zvikamu zvemashini;
d.Pakati pesimba regiravhiti remuchina unokwanisa kuchengetedza kuenzana kwayo pasi pemamiriro akasiyana-siyana, ichiwedzera mashandiro ekugadzirisa pasi-graping kugona;
• Zero Proximity - michina inogona kushanda mukati me5cm yemudhuri (ine fenicha yakawanda kumashure)
• Superior three-position balance - TV uye full recline mabasa anotsvedzerera uye anoramba achienderera mberi, michina inogona kugadziriswa nokuda kwemafuremu makuru kana madiki.
• Ottoman Extension - iyo yakanyanya kuwedzera ottoman pamusika nhasi inopa kunyaradza kwakanyanya muTV uye nzvimbo dzakazara dzakatsamira.
• Articulated sub-ottoman dhizaini kuzadza zvinoyevedza nzvimbo iri pakati pe ottoman board nechigaro kana zvichidikanwa kana zvichidikanwa.
simudza recliner chair-imwe mota
a.Kushandisa mota mbiri kutyaira iyo michina, imwe mota inoshanda panguva imwe chete kune footrest uye kusimudza chiito, imwe inodzora backrest yega;
b.Kushanda kuri nyore uye kuri nyore.Kushandisa magetsi ekudzora magetsi kunogona kuona maitiro akasiyana ekuisa;
c.Machiniya anoita chiito chekusimudza uchirerekera;
d.Nehupamhi uye mota switch yechigadzirwa, zvakasiyana-siyana zvinotsanangurwa zviripo pakusarudza;
simudza recliner chair-dual mota
Iyo isiri-recline hardware inogadzirwa neAnji jikeyuan Furniture Components inopa musika wanhasi zvinhu zvemhando yepamusoro zvakagadzirirwa kusimba uye kuita zvakasiyana.Kunyangwe iri ma glider, swivels, kana hinges, Furniture Components ine hunyanzvi hwekugadzira iyo inodiwa hardware kune akasiyana masitayipi efenicha.
Mechanicha yechigaro cherocker recliner inokonzereswa kuve nekunyaradza uye kugadzikana, kuve nekunatsiridza kusununguka kwekushanda, uye kuda zvidimbu zvishoma zvekugadzira.Iyo meshini inosanganisira rocker locking linkage yakarongwa kuti ibatanidze chinongedzo chekutyaira chinotsvedza chakabatana nechinhu chekutyaira, kutyaira nhengo yekuvhara yekuvhara chigaro ichipokana nekuzununguka kana ottoman yechigaro ichiwedzerwa.
Iyo Push-on-the-Arms masisitimu anogadzirwa neAnji jikeyuan Fenicha Zvikamu zvakakurumbira muindastiri uye inopa akasiyana-siyana macheya sarudzo.Nekushanda kuri nyore kuburikidza nekusundidzira-pa-the-maoko kufamba, iyi nzira inopa isingadhure imwe nzira yemacheya ekurembera anoda kurapwa kwemakumbo kwakasiyana.Matanho edu anogadzirwa kubva kumhando yepamusoro zvinhu, uye ndezvimwe zvezvakanakisa zvinowanikwa pamusika nhasi.
1.MODEL: Okin DeltaDrive 1.28.000.131.30 fenicha chikamu kutsiva.Kushandisa mune sofa yemagetsi, loveseat, simudza chair massage chair
2.CONNECTIONS: 2 Pin Flat Round Power Transformer Connection 5 Pin Hand Control Plug Connection.Min kuisa ukuru: 15.31 inches, Stroke: 8.27 inches
chigaro chekusimudza chekupedzisira